Aqriso:- warbixin ku saabsan Doorashada Aqalka hoose ee Baydhabo iyo cida Maanta ladoortay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Aqriso:- warbixin ku saabsan Doorashada Aqalka hoose ee Baydhabo iyo cida Maanta ladoortay
written by warsan radio 24/11/2016
Waxaa maanta lasoo gabagabeeyay doorashada aqalka hoose wajigii labaad ee ka soctay xarunta ku meel gaarka Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya.
Waxaa saakay Doorashada lagu bilaabayKursiga Beesha Biimaal jilibka Daadoow, waxaana ku tartamayayay afar Musharax oo kala ah Aamino Sheekh Cusmaan,Cali Sheekh Maxamed,Saynab Siid Cali Xaaji, Musdhaf Axmed Iidoow.
Markii ay dhammatay codayntii Ergada waxay ergada waxay gudiga ku dhawaaqeen natiijada doorasshda taasoo ay ku soo baxday Aamino Sheekh Maxamed oo heshay39 cod.
Musdhaf Axmed Diinoow oo ahaa musharaxii ugu dhowaa oo la tartamayay kursiga beesha Biimaal wuxuu helay 9 cod taasna waxayAmino Sheekh Maxamed u horseeday in sedexda sano ee soo socota noqoto Xildhibaanada Beesha biimaal u matali doonta kursiga afrta sano ee soo socota.
Doorashada labaad waxaa ku tartamay Nadiifo Aadan Isaaq iyo Xaliimo Xasan Maxamed. Intii aan la la codayn waxaa tanaasushay xaliimo Xasan Maxamed, halkaasna waxaa kursigii beesha Barbaare ku guulaysatay Nadiifo Aadan Isaaq oo heshay Dhamman cododkii ergada oo dhammaa 51 co.
Barfasoor Maxamed cumar Dalxa ayaa ku guulatstay kusigii Beesha Hintire kadib markii uu tartanka ka baxay musharixii la tartamayay ee lagu magacaabo Maxamed Shuute Xuseen kaasoo hoolka dhexdiisa ka sheegay in uusan tartamaynin, isagoo ku andacooday in ergadiisii laga saaray liiska islamarkaasn lagu bedelay ergo kale sida uu ka sheegay sir jaraa’iid ee uu ku qabtay gudaha madaxtooyada.
Sikataba ha’ udhacdo doorashada waxaa kursigii beesha loo doortay Xildhibaan Prof. Maxamed Cumar Dhalxa oo helay 51 cod.
Kursiga Beesha beesha hintire waxaa ka taagnayd cabasho uu qabay musharaxa ka baxay tartanka aq,iasagoo sheegay in laga galay eed kadib markii ugaaska beesha xildhibaan dalxa uu ku eedeeyay in ay isdaba mariyeen liiskii ergada waa kan musharax shuute oo sheegaya in uu wali yahay musharax.
Waxaa soo gabagaboobay wajigii labaad ee doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoo ilaa iyoiminka la doortay 49 mudane oo ku soo baxay doorashooyinkii ka dhcay Dowlad Goboleedka Koofur galbeed Soomaaliya. Waxaana la filayaa in maalinta berito ah uu bilaawdo wareegii ugu danbeeyay oo la filayo in ay ku soo baxaan 20 xildhibaan oo ka dhiman tirade hadda soo baxday taasoo ka dhigi doonta tirade ee kuraasta la rabo in ay ka soobaxaan KGs 69 kursi.
Aqriso:- warbixin ku saabsan Doorashada Aqalka hoose ee Baydhabo iyo cida Maanta ladoortay was last modified: November 24th, 2016 by warsan radio